trano fisaka metaly safira DIY fafana China Manufacturer
Description:Toeram-pivoahana metaly Flat Roof De-icing,Toeram-pisakafoanana manify,Metal Roof Fanosihosena sarimihetsika
Home > Products > Fihetseham-pandrefesana ny fitrandrahana Snow systerm > Fihirana hafanana mafana amin&#39;ny fiarovana ny saha > trano fisaka metaly safira DIY fafana
· (1) Fanaraha-maso haingana sy maharitra.
(2) Toe-karena sy fanamafisana, fahadiovana ary fahazavana
3) Waterproof sy tsy misy poizina, tsy misy sakafony
(4) Mora ampiasaina sy miasa.
· (5) Fahombiazan'ny fiovam-piovàna
· (6) Afaka mifikitra amin'ny hafanana (manana adhesive)
- Fanamafisana ny fiarovana sy ny fanamafisana ny fifehezana amin'ny karazana fitaovana sy fitaovana maro.
- fitaovana ara-pitsaboana toy ny mpandinika ny ra sy ny fantson-jaza.
• Peripheralan'ny solosaina toy ny laser-printy.
Fanasitranana plastika plastika.
Fanodinana fitaovana fitaratra.
· Fitaovana fanodinana semiconductor.
· Fitaovana fampitaovana ara-panafody
- Drums sy ny fanaka hafa ary ny fanaraha-maso ny gidro ary ny fitehirizana asphalt.
lolo mamirapiratra ho an'ny tafo na rantsana Contact Now
Toeram-pivoahana metaly Flat Roof De-icing Toeram-pisakafoanana manify Metal Roof Fanosihosena sarimihetsika Toeram-pivoahana matevina Toeram-pivoahana manasitrana fafana Toeram-pisakafoanana thermal heated Toeram-piofanana hafahafa lavitra be Toeram-pisakafoanana mafana